ဝေ(စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်): တိမ်တောက်သည့် ဆည်းဆာ
လက်ထဲ ရောက်လာသည့် နှစ်ရာတန် လေးကို ကြည့်ပြီးဘွားဆုံ ရုတ်တရက် နားမလည်နိုင်။ အခြေ အနေကို အံ့အားသင့်ပြီး တွေဝေ ငေးငိုင် နေမိ၏။ သူမ ပုံစံက ဘာကို ကိုယ်စားပြု နေပြီနည်း။
“အမေကြီး၊ နေအရမ်း ပူတယ်။ လမ်းလျှောက် မနေနဲ့ ဦးနော်။ ကားစီးသွား” ပေးတဲ့ သူကတော့ စေတနာ အပြည့်နှင့် အဘွားအို အတွက် ရာသီဥတု ဒဏ်က ကင်းလွတ်ပြီး လိုရာခရီး အမြန် ရောက်စေဖို့ ကူညီလိုက်တာ ဖြစ်သည်။ ဘွားဆုံကတော့ သူများ အထင်လွဲ လောက်အောင် သူမ ပုံစံက ညစ်ထေး နွမ်းဖတ် နေပြီလားဟု သုံးသပ် နေမိဆဲ။
လမ်းသွားလမ်းလာ တချို့က နွမ်းယဲ့ယဲ့ အဘွားအိုနှင့် လက်ထဲမှ ပေးကမ်းထားသော နှစ်ရာတန် ငွေစက္ကူ တစ်ရွက်။ ထိုပုံရိပ် တို့မှ တစ်ဆင့် စီးကျလာသော လျှပ်တစ်ပြက် သဒ္ဓါတရား တို့ဖြင့် ဘွားဆုံ လက်ထဲသို့ ငွေစက္ကူ လေးများ တစ်ရွက်ပြီး တစ်ရွက် ထပ်ရောက် လာရ၏။ ငါးဆယ်တန်များ၊ တစ်ရာတန် အချို့၊ နှစ်ရာတန် လည်းပါ။
ယောင်နနနှင့် ငွေစက္ကူ လက်တစ်ဆုပ် ကိုင်ပြီး အချိန် အတန်ကြာ ရပ်နေမိတော့ နောက်ထပ် တဖွဲဖွဲ ရောက်လာသည့် ငွေများက လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လို့ပင် မဆံ့တော့။ ခေါင်းပေါ်က တဘက်ဟောင်း လေးချွတ်ပြီး ထည့်လိုက်ရင်း သက်ပြင်း ရှိုက်မိသည်။
“လာ လာ မြို့သစ်ကို တစ်ရာတည်းရယ် လိုက်မလား”
ထိုးရပ်လာသော လိုင်းကားလေးပေါ် တုန်ချည့်ချည့်နှင့် ပိုက်ဆံတစ်ရာ ပေးရင်း တုတ်ကောက်လေး အားပြု တက်လိုက်တော့ စပယ်ယာက ဖေးမပြီး ဆွဲတင်ပေး၏။ ခုနက စပယ်ယာလို “ပိုက်ဆံ မပါရင် လမ်းပဲလျှောက်တော့ အမေကြီး” လို့ ရက်ရက်စက်စက် မစိမ်းကားပါ။
သည်လို မစိမ်းကားအောင် ကူညီ ပေးသွားသည့် စေတနာ ရှင်ကို သတိရ သွားတော့ လက်ထဲမှ တဘက်ဟောင်း လေးကို ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်မိသည်။ တဘက်ထဲမှာ စုထုပ်ထားသည့် ငွေစက္ကူ တွေက ဘယ်လောက်များ ရှိမည်မသိ။ နည်းတော့ မနည်းလှ။ တစ်ခါမှ စိတ်မကူး ဖူးသည့် အခြေအနေ တစ်ခုကို မမျှော်လင့်ဘဲ ရောက်ခဲ့ ရသည်မို့ ဘွားဆုံ ရင်ကတော့ ကတုန်ကယင် ဖြစ်နေတုန်း။
အိမ်ပေါက်ဝမှာ ဆီးကြို နေသည့် မြေးမလေးက ထွေးလုံးနေသည့် တဘက်ဟောင်း ထဲက ငွေစက္ကူ တွေကိုမြင်တော့ အံ့သြသွားပုံ ရ၏။
“အဘွား၊ ပိုက်ဆံတွေလည်း ပွစာကျဲလို့။ ချော်လဲ လာတာလား”
“ဟုတ်ပါဘူး မြေးရယ်။ မြေးဖေဖေ ပို့တဲ့ ပိုက်ဆံက ဒီမြို့က ဘဏ်ကို မရောက်သေး လို့တဲ့။ ထုတ်မရ ခဲ့သေးဘူး။ ဒါတွေက”
ဘွားဆုံ စကားကို ဖြတ်ပြီး ရေတစ်ခွက် အရင် သောက်လိုက်သည်။ မြေးမလေးကို ပြောသင့်၊ မပြောသင့် မဝေခွဲ နိုင်သေး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပင် ဘာဖြစ်ခဲ့မှန်း ရေရေရာရာ ပြန်မတွေးဝံ့ သေး။ ငွေစက္ကူတွေကို ထိုင် စီနေသော မြေးမလေးမျက်နှာ ကတော့ ၀င်းလက်နေပြီ။ မနက်ဖြန် ဗလာ စာအုပ်ဝယ်ပြီး ကျောင်းတက် နိုင်ပြီလို့ ပျော်နေ လေသည်လား မပြောတတ်။ သူ့ခမျာ ရေးစရာ ဗလာစာအုပ် ကုန်နေတာကို ၀ယ်ပေးဖို့ ပိုက်ဆံ မရှိသေးသည်နှင့် ကျောင်းမသွား ၀ံ့တာ သုံးလေးရက်တောင် ရှိရှာပြီ။
“မောင်လေးက အဖျား ပြန်တက်လာလို့ အိပ်နေတယ် အဘွား”
ရေတစ်ခွက် သောက်လိုက်ရလို့ အေးသလို ရှိသွားသည့် ဘွားဆုံရင်ထဲ အပူလုံးကြီး ချက်ချင်းပြန်ဆို့ လာပြန်သည်။ နုံးချည့် နေပေမယ့် ရုန်းထပြီး မြေးငယ်လေး ရှိရာ အတွင်းခန်းကို ပြေးသွားလိုက်၏။ စိတ်ကသာ ပြေးသည် ဆိုသော်လည်း ချည့်နဲ့နဲ့ အဘွားအိုမို့ တစ်လှမ်းချင်းသာ ရွေ့နိုင်၏။ ကြမ်းခင်းကလည်း ခနော်နီ ခနော်နဲ့ ဆိုတော့ လိုရာကို တော်တော်နှင့် မရောက်နိုင်။
အသက်ကြီး လာတော့ ဘာမှ မကောင်းတော့ ပါဘူး။ ဒူးလည်းမကောင်း၊ ခါးလည်းမကောင်း၊ မျက်စိလည်း မကောင်း၊ နားတောင်မှ လေတွေထွက်ပြီး အူနေလို့ သိပ်ကောင်းကောင်း မကြားချင် တော့ဘူး။ ငယ်ငယ်တုန်းကလို စိတ်သွားတိုင်းသာ ကိုယ်ပါလို့ ကတော့ ဈေးတောင်း ခေါင်းရွက်ပြီး မြေးတွေကို ဒေါင်းတင်မောင်းတင် ရှာကျွေး လိုက်ချင်သေးသည်။ ခုတော့ သမက် ဖြစ်သူ၏ လုပ်စာကို မျှော်ကိုးပြီး စောင့်နေရတာ။ မြေးအဘွား တစ်တွေ ငတ်တာလည်း အကြိမ်ကြိမ်၊ ပြတ်တာလည်း အခါခါ၊ ချေးရတာလည်း အတိုးနဲ့ ဆိုပေမယ့် ကြာတော့ ထပ်ချေး ချင်တဲ့သူတောင် မရှိတော့။ အိမ်လခ ကလည်း သုံးလေးလ မပေးနိုင်လို့ အိမ်ရှင်က နှင်ချနေပြီ။
ရေနံမှော် လိုက်သွားသည့် သမက်က ငွေပို့ မမှန်တော့ သူပို့လိုက်သည့် ငွေက ရောက်တာနဲ့ အတိုးတွေ၊ အကြွေးတွေ၊ အိမ်လခတွေ ထိုးဆပ်လိုက်တာ နှင့်ပင် ဘာမှ မကျန်တော့။ ဒီတော့ လိုအပ်သမျှ ထပ်ချေးရင်း နဲ့ပဲ လုံးလည်လိုက် နေရသည်။
ဘွားဆုံ သက်ပြင်းမောကို ရှိုက်ရင်း မြေးငယ် နဖူးကို စမ်းလိုက်တော့ လက်ဖ၀ါးမှ အပူက နှလုံးအိမ် အထိ မြိုက်ခနဲ ကူးစက်ပူလောင် သွား၏။
“ဘုရား ဘုရား ပူချစ် နေတာပါလား။ သားရေ ဖိုးကဲ ဖိုးကဲ”
ကလေးက တော်တော်နှင့် ပြန်မထူးတော့ ဘွားအေရင်ထဲ မီးခဲ မျိုမိသလို ဖြစ်လေပြီ။
“မိစု၊ မိစု၊ အမြန်လာ ကြည့်စမ်း။ ညည်းမောင်လေး သတိများ လစ်နေ သလားဟယ်။ ငါလည်း ဘာမှ ကောင်းကောင်းမမြင် ရဘူး”
အစ်မ လုပ်သူက လှုပ်လှုပ်နှိုးမှ ကလေးငယ်က “အင်း” ခနဲ သံရှည်ဆွဲ ညည်းရှာ၏။ သတိပဲ လစ်နေသည်လား။ အိပ်ပဲ ပျော်နေသည် လားတော့မသိ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆေးခန်း သွားပြမှ ဖြစ်တော့မည်။ ဖျားနေတာ နှစ်ရက် ရှိပေမယ့် ပိုက်ဆံလည်း မရှိသည်မို့ ကွမ်းယာဆိုင်မှ အုပ်ဆေးလေး ၀ယ်လူးလိုက်၊ အဖျားကျ ဆေးလေး ၀ယ်တိုက်လိုက်နှင့် နေခဲ့ရသည်။ ခုတော့ မိမိ ရလာသည့် ပိုက်ဆံလေးနှင့် ဆေးခန်းသွားပြ လိုက်မည်။ လောက်ပါ့မလား တော့မသိ။
“သမီး ခုနက ပိုက်ဆံရေတာ ဘယ်လောက်ရလဲ”
“နှစ်ထောင့် သုံးရာနဲ့ ငါးဆယ်”
“ဟယ်” ခနဲ ဘွားဆုံ ရင်ထဲ လှိုက်ခုန် သွားရ၏။ ရလာတာ မနည်းပါလား။ ဈေးထွက် ရောင်းရင်တောင် အမြတ် နှစ်ထောင်ကျော် ရဖို့ဆိုတာ တစ်နေကုန် တာတောင် မသေချာ။ ဒီကြားထဲ ရှုံးချင် ရှုံးနိုင်သေးသည် မဟုတ်လား။
ဒါကြောင့်လည်း မြို့ထဲက လူစည်းကားရာ တစ်ဝိုက်မှာ တောင်းရမ်းစားသောက် နေသူတွေ ပိုပို များလာတာ ဖြစ်မည်ပေါ့။
သက်ကြီးရွယ်အို ဒုက္ခိတတွေ ကတော့ ထားပါတော့။ တချို့ဆို ခြေလက် အပြည့် အစုံနှင့် အရွယ်ကောင်း တွေကလည်း တောင်းရမ်းနေတာ မြင်ဖူး၏။ တစ်ခါတလေ အကောင်းက ဒုက္ခိတ ယောင်ပင် ဆောင်လိုက်သေး၏။ လုပ်ကိုင် စားရတာထက် တောင်းစား ရသည်က ပိုတွက်ခြေ ကိုက်နေသည် လားမှ မသိတာ။ ဒီလို ရေသာခို အချောင် လိုက်ချင်စိတ်က လူကို အညွန့်ကျိုး စေသည်ဟု ဘွားဆုံကတော့ နှမြောမိသည်။
“အဘွား ဘာတွေတွေး နေတာလဲ။ ဆေးခန်း သွားမယ်ဆို”
သူ့မောင်လေးကို မနိုင်မနင်း ချီထားသော မြေမလေးက သတိပေးမှ ဘွားဆုံ စိတ်နှင့်လူ ပြန်ကပ်တော့၏။ သုံးနှစ် သားလေးကို ရှစ်နှစ် သမီးက ချီထားသည့် မောင်နှမနှစ် ယောက်မြင်ကွင်းက ဘွားဆုံ ရင်ကို ဆို့နင့်စေသည်။ အဘွားအိုက ယိုင်နဲ့နဲ့မို့ မြေးကို ချီပိုးဖို့ နေနေသာသာ ကိုယ့်အရိုး ကိုပင် အနိုင်နိုင် သယ်နေရသည့် အခြေအနေ။
အသေစော ရှာသည့် သမီးကို သတိရ မိတော့ ရေနံမှော်မှာ ပင်ပန်း နေရှာမည့် သမက်ကလည်း အတွေး အာရုံမှာ နောက်ဆက်တွဲ တွယ်ငြိလာ ပြန်သည်။ အရင်ကတော့ သမက်က ဆိုက်ကားနင်း၊ သမီးက ဈေးရောင်း၊ အမေက ချက်ပြုတ် ကလေးထိန်းနှင့် မိသားစု လေးဟန် ချက်ညီနေခဲ့ သေးသည်။ လင်မယား နှစ်ယောက်က ဒိုင်ခံ ရှာဖွေ၍ တစ်သက်လုံး ဈေးတောင်း ခေါင်းရွက် ကျွေးလာခဲ့သည့် အမေကို သမီးရော၊ သမက်ကရော အိမ်မှုကိစ္စ လောက်နှင့်သာ အနားပေး ထားခဲ့၏။
“အမေ ဈေးရောင်း နိုင်သေးတယ်။ ငွေရှာ ချင်သေးတယ်။ သုံးယောက်လုံး တက်ညီလက်ညီ ကြိုးစားပြီး စုလိုက်ရင် တို့ဘိုးဘွားပိုင် အိမ်လေး သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြင်ဆောက် နိုင်တာပေါ့” လို့ ပြောလည်း သမီးနှင့် သမက်က လက်မခံ ခဲ့ပါ။
ခုတော့ သမီးလေး ဆုံးတာပင် သုံးနှစ်ပြည့် တော့မည်။ မြေးအငယ်ကောင် မွေးပြီး ကတည်းက နှလုံး အားနည်းသော သမီးခမျာ အိပ်ရာထက်မှ မထနိုင်ခဲ့။ သမီး အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့ ဘိုးဘွားပိုင် အိမ်လေးကို လက်လွှတ် ခံလိုက်သော်လည်း ကံကြမ္မာက သမီးကို လွတ်ငြိမ်းခွင့် မပေးခဲ့ပါ။ သားကလေးမှ လူမှန်း မသိတတ် သေးခင် ဘွားအေ လက်ထဲမှာ စိတ်ချလက်ချ ထားသွား ခဲ့လေသည်။
မိသားစုလေး တစ်ခု ခိုင်ခိုင်မတ်မတ် ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ဟန်ချက်ညီ ထမ်းပိုးထားသည့် ဒေါက်တစ်ချောင်းပြုတ် ထွက်သွားပြီးသည့် နောက်မှာတော့ ဘွားဆုံတို့ တစ်တွေ အယိုင်ယိုင် အလဲလဲ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ဘွားဆုံလည်း စိတ်ထောင်း၍ ကိုယ်ကြေ ဆိုသလို အသက်ထက် ပိုအိုစာ နေပြီ။
အသောက် အစားကင်းသည့် သမက် ကလေးက နှစ်ဆတိုးပြီး ကြိုးစား ရှာပေမယ့် ယိမ်းသထက် ယိမ်းလာသည့် အသိုက် အမြုံလေး အတွက် ကျားကန်နိုင်ဖို့ အဖော်ကောင်း သဖြင့် ရေနံမှော်ကို လိုက်သွားခဲ့သည်။ “ပိုက်ဆံ ရပေမယ့် ပင်ပန်း ဆင်းရဲရှာတယ်” လို့ ပတ်ဝန်းကျင် ကရော လူကြုံများ ဆီကပါ သတင်း ကြားရတော့ ဘွားဆုံ စိတ်မကောင်း။
လူကြုံနှင့် သမက်ကလေး ပို့ပေးသည့် ငွေစလေး များကို ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ် ခြိုးခြံ သုံးစွဲ၏။ ကျောင်းနေ ရွယ်ရောက်လာသည့် မြေးအကြီး မကို ကျောင်းထား၏။ ပိုလျှံ ငွေလေးများကို ချွေတာ စုဆောင်းပြီး ဈေးရင်းလေး ရရင် ဘွားဆုံလည်း တစ်ဖက် တစ်လမ်းက ၀င်ငွေရအောင် တစ်ခုခု လုပ်ရ ကောင်းမလားဟု အမြဲကြံဆ နေတတ်၏။ ဈေးကို လျှောက်မရောင်း နိုင်တော့လည်း ထိုင်ရောင်းရမည့် တစ်ခုခုပေါ့။ လမ်းဆုံမှာ မုန့် ပျားသလက် ဆိုင်လေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖွင့်ချင်သည်လေ။
တဖြည်းဖြည်းနှင့် သမက်လေး ဆီက လူကြုံ အလာကလည်း ကျဲလာသည်။ အမေအို့ စုငွေကလည်း လျှောသွား ရုံမက ချေးငွေတွေပင် ပတ်လည် ၀ိုင်းနေရပြီ။ သုံးလေးလမှ တစ်ခါ လူကြုံ လာတတ်သလို နောက်ဆုံး တစ်ခေါက်ကတော့ လူကြုံ မရှိ၍ ဆိုကာ ဘဏ်မှ ငွေလွှဲလိုက်၏။
လူကြုံ တချို့ကတော့ အမေအို့ သမက်ကလေး နောက်အိမ်ထောင်ပဲ ကျနေ သလိုလို။ သောက်တတ် စားတတ်လာပြီး ပျက်စီးနေ သလိုလို။ မရေမရာ သတင်းပေး ကြ၏။ အရွယ်ကောင်းရှာ သေးသည့် သမက်ကို အပြစ် မပြောချင် ပေမယ့် မြေးကလေး နှစ်ယောက် လူလား မြောက်ဖို့ အတွက်တော့ ဘွားဆုံ ရင်လေးလှသည်။ လမ်းဘေး လက်ဖက်ရည်ဆိုင် များမှ စားပွဲထိုး လေးတွေ နေရာမှာ မြေးကလေးကို မြင်ယောင် ကြည့်မိတိုင်း ရင်ထဲမှာ နာကျင်ဝမ်းနည်း မိ၏။
သို့ပေမယ့် မယ်ဆုံငယ် ငယ်တုန်းက မုဆိုးမ ဘွဲ့ကို ခါးစည်း အံကြိတ်ရင်း တစ်ကိုယ်တည်း ရုန်းကန်ပြီး သမီးကို ပညာသင်ပေး ခဲ့သေးသည် မဟုတ်လား။ မပြည့်စုံသည့် ကြားက အလယ်တန်း အထိတော့ သမီးက ပညာ သင်ခဲ့ရသည်။ သက်ဆိုး မရှည်ရှာသည့် သမီးလေး။ ခုလို သူ့ ရင်သွေးလေးတွေ ဘွားအေကြီး တစ်ယောက်လုံး ရှိပါ သေးရက်နှင့် ပညာမသင် နိုင်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် ခိုင်းစားနေတာများ သိရင် ရောက်ရာဘ၀မှာ ရတက်အေး ရှာမည်မဟုတ်။
ဘွားဆုံ မလုပ်ရက်ပါ။ မြေးလေးတွေကို ဘယ်တော့မှ ခိုင်းမစားပါ။ ဘွားဆုံ အသက်ရှင် နေသရွေ့ သည်မြေးလေး နှစ်ယောက် ငတ်မသေ စေရ။ အလင်းမကွယ် စေရ။ ရသည့်နည်းဖြင့် ရှာကျွေးမည်။ ဖြစ်အောင် ကျောင်းထားမည်။ အမေအို့ ရင်ထဲမှာ တီးတိုး ကျူးရင့်နေပြီး အရိုးထဲမှ ခွန်အားတွေ ညှစ်ထုတ်စုစည်း မိလေပြီ။ အဘွားအို အတွက် မြေးလေးတွေက နှလုံးသားရဲ့ အနှစ်တွေပဲ မဟုတ်လား။
“ဒေါ်မယ်ဆုံ နာမည်နဲ့ ငွေလွှဲ ဒီနေ့လည်း ရောက်မလာ သေးဘူး အမေကြီး။ ဘဏ်များ လွဲနေလား။ သတင်းများ မှားနေလား”
လေအေး ပေးစက်ကြောင့် အေးစိမ့်နေသော ဘဏ်ထဲမှာ ဘွားဆုံတစ်ယောက် ဇောချွေး ပြန်နေရ၏။ သမက် ကလေးက ငွေလွှဲမယ်လို့ ဖုန်းဆက်ကြောင်း လမ်းထိပ် လက်ဖက်ရည် ဆိုင်က လာပြောသွားတာ သည်ဘဏ်ပါပဲ။ ဘွားဆုံတို့ မြို့လေးမှာ ဘဏ်က လေးငါးခု ရှိတာမို့ သေချာအောင် စာရွက်ထဲ ရေးမှတ်ထား ခဲ့သည်ပဲ။
ပို့မယ် အကြောင်းကြား ပြီးကာမှ ကိစ္စ တစ်ခုခုပဲ ပေါ်လေသလား။ သတင်းပဲ မှားပို့မိ တာလား။ ဘွားဆုံ မနေ့က လာတော့လည်း ငွေလွှဲ မရောက်သေး ဆို၍ ဒုက္ခများ ခဲ့ရသေးသည်။ လမ်းထိပ်မှ ဆိုက်ကားငှား စီးလာခဲ့ရာ ဘဏ်ရှေ့ရောက်တော့ ဆိုက်ကားခက ငါးရာတဲ့။ ဘွားဆုံမှာက ကွမ်းယာဆိုင်မှ ချေးလာခဲ့သော ငွေနှစ်ရာသာ လက်ထဲ ပါခဲ့၏။ ဆိုက်ကား သမားကို “ဘဏ်က ငွေထုတ်ပြီးရင် လိုတဲ့ငွေလည်း ပေးပါ့မယ်။ အပြန်လည်း ဆိုက်ကား ထပ်ငှားစီးမယ်” ဆိုပြီး တောင်းတောင်း ပန်ပန်နှင့် ဘဏ်ရှေ့မှာ စောင့်ခိုင်းခဲ့သည်။
သို့ပေမဲ့ ငွေလွှဲက မရောက်သေး ဆိုတော့ဘွားဆုံ အကျပ် ရိုက်ရပြီ။ ဆိုက်ကား သမားကို “နောက်နေ့ ငွေလာထုတ်မှ ပေါင်းပေးပါ့မယ်။ အိမ်ပြန်ပို့ ပေးပါ။ မနက်ဖြန်လည်း အကြိုအပို့ လုပ်ပေးပါ” လို့ ရလိုရငြား ထပ်ပြော ကြည့်ပေမယ့် ဆိုက်ကား ဆရာက ယုံကြည်ပုံ မပေါ်တော့။ မရေရာသည့် ငွေအတွက် ခရီးလှမ်းသော အိမ်ကိုလည်း လိုက်ပို့ချင် ပုံမရ။ “မြို့သစ် ဘက်သွားတဲ့ လိုင်းကားသာ စီးသွားတော့ အမေကြီးရေ။ လိုင်းကားခ ကတော့ သက်သာလိမ့်မယ်” တဲ့။
အသက်ကြီး လာသည့် နောက်ပိုင်း မြို့ထဲကို အသွား အလာနည်းပြီး မြို့စွန်ရပ် ကွက်လေး အတွင်းသာ အနေ များတော့ ဆိုက်ကားခတွေ ဒီလောက် ဈေးကြီး တာလည်းမသိ။ လိုင်းကားတွေ လမ်းကြောင်းလည်း နားမလည်၊ မြို့ထဲမှာ မျက်စိပင်လည် ချင်ချင်။
သို့နှင့် ချွေးခံအိတ်ထဲ စမ်းသပ်ရှာဖွေ ပြန်တော့ ပိုက်ဆံက အကြွေလေးပင် တစ်ရွက်မှ မကျန်တော့။ ကားသမား ကလည်း ဟိုစမ်း ဒီစမ်းနှင့် ယောင်လည်လည် ဖြစ်နေသော အဘွားအိုကို စိတ်မရှည်။ မြို့လယ်ကောင် နေပူပူ ထဲမှာ အသည်း မာမာနှင့် ထားခဲ့ပြန်သည်။
ဒီအချိန် မှာပဲ တုတ်ကောက် တစ်ချောင်းကို အားပြုကာ ခါးကကိုင်းကိုင်း၊ ခေါင်းဆောင်း တဘက်က ညစ်နွမ်းနွမ်း၊ အင်္ကျီ လုံချည်က မွဲကြေကြေနှင့် အရောင် အဆင်းမှုန်မှိုင်း နေသောအမေ အိုကို နေပူထဲ တရွေ့ရွေ့ လှမ်းနေရတာ မကြည့်ရက်သည့် သူတော်ကောင်းလေး တစ်ယောက်က “ကားစီးသွားပါ” ဆိုပြီး ငွေနှစ်ရာ လှူလေသည်။ သူငယ်က အမေအို့ အဖြစ် အပျက်ကို အစအဆုံး မြင်သွားပုံလည်း ရ၏။
သူငယ်လှူသည့် ငွေကို ကြောင်အမ်းအမ်း ကိုင်ရင်း တွေဝေ နေမိသော အဘွားအိုကို လမ်းသွား လမ်းလာများ ကလည်း တစ်မျိုး မြင်သွားပြီး ငွေတွေဆက်တိုက် ထည့်ဝင်လှူဒါန်း ကြပြန်တော့ မနေ့က အိမ်အပြန်မှာ ဘွားဆုံ ငွေထုပ် ကလေးပိုက်ပြီး ပြန်သွား ခဲ့ရသည်လေ။
စိတ်ထဲ မသိုးမသန့် ဖြစ်မိသော်လည်း ကြာကြာ အတွေး မပွားနိုင်။ မြေးအငယ်ကောင် တက်မတတ် ချက်မတတ် အဖျားကြီး နေတာကို ဆေးခန်းသွားပြ ရသေး၏။ အမေအို့ကို ပေးကမ်းကြသည့် ငွေလေးတွေ ကပဲ မြေးကလေး အတွက် ဆေးတစ်ပေါက် ဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။ ကိုယ့်ကို တောင်းရမ်းသူလို့ အထင် ခံရခြင်းကို တစိမ့်စိမ့် ၀မ်းနည်းဖို့ထက် မြေးလေး အသက်ကို ကယ်ဖို့က အရေးကြီးသည် မဟုတ်လား။
ဒီနေ့လည်း ဘဏ်ကို မျှော်လင့်ခြင်း ကြီးစွာနှင့် ရောက်လာပေမယ့် ငွေလွှဲက မရောက်ဆိုတော့ ဘွားဆုံ နေပူကျဲကျဲ လမ်းမပေါ်မှာ ယောင်လည်လည် ဖြစ်ရပြန်၏။ သို့ပေမဲ့ ဒီနေ့တော့ ဘွားဆုံ ပါးသွားပြီ။ ဆိုက်ကား စီးမလာဘဲ လိုင်းကား စီးလာခဲ့သည်။ အပြန် စရိတ်လည်း ချန်ထားခဲ့လို့ ပူစရာ မလို။
ခက်သည်က မြေးငယ်လေး အတွက် ဆေးခန်း ပြစရာ ငွေမရှိတော့။ မနေ့က ရသည့် ပိုက်ဆံကလည်း ဆေးတစ်ပေါက် ထိုးပြီး သောက်ဆေးလေးဝယ်၊ မြေးအဘွား တစ်တွေ ညစာလေး စီမံချက် ပြုတ်လိုက်တာ ကုန်လေပြီ။ မြေးငယ်က အဖျားချို သွားပေမယ့် ရှင်းရှင်းတော့ မကျသေး။ ဆရာဝန်က ဆေးကို သုံးရက်လောက်တော့ ဆက်ထိုး ရမည်တဲ့။ အကြီးမလေး ကလည်း စာအုပ် ၀ယ်စရာ ငွေမကျန် တော့၍ မျက်နှာလေး ညှိုးနေသော်လည်း ဘာမှတော့ မပြောရှာပါ။
ဒီနေ့ မနက်တော့ ညကကျန်သည့် ထမင်းခဲ လေးကို မြေးအဘွား သုံးယောက် ဝေမျှ စားခဲ့ပြီးပြီ။ ဝေမျှတယ်သာ ဆိုတာပါ။ မြေးတွေကို ငဲ့ပြီး ဘွားဆုံက တစ်လုတ် တစ်ဆုပ်သာ မြို့ထဲထွက်မည် မို့အားရှိအောင် လည်ချောင်း နင်နင်နှင့် ရေဖြင့်မျှော ချခဲ့ရသည်။ ဒီလိုသာ ဆိုရင်ဖြင့် ညစာကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကုန်စုံဆိုင်က ဘုမကို အသနား ခံပြီး ဆန်ထပ်ချေးဖို့ အောက်ကျို့ ရဦးမည့်ပုံ။
အတွေးဖြင့် စိတ်မောစွာ သက်ပြင်းအချ လူက နိမ့်ခနဲ ချော်ကျသွားကာ နဂိုက ကိုင်းညွတ် နေသည့်ခါးက ဘယ်လိုမှ ပြန်မတ်၍ မရတော့။ တောင်ဝှေးတခြား လူတခြား လဲကျသွားသော အမေအိုကို လမ်းသွားလမ်းလာ တစ်ယောက်က ထူမ ပေးဖို့လက် ကမ်းစဉ်မှာ မနေ့က သူတော်ကောင်း လေးများလားလို့ သတိ ရမိ၏။ အမေအိုကို ကူညီဖို့ ရောက်လာ ပြန်လေပြီ။
မနေ့က အဖြစ် အပျက်ကို သတိ ရမိတော့ ဘွားဆုံ မျက်ရည်တွေ လည်ပြီး ရင်တွေခုန်လာ ပြန်၏။ ခေတ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း၊ ဘယ်လောက်ပဲ ရှားပါးတယ် ပြောပြော၊ တို့မြန်မာတွေရဲ့ ချစ်စရာ ကူညီ လိုစိတ်နဲ့ သဒ္ဓါ တရားကတော့ ကျန်နေသေး ပါလားလို့ ၀မ်းသာပြီး မျက်ရည် လည်မိတာပါ။
သို့ပေမဲ့ လွယ်လွယ် ကူကူ ရလာမည့် ငွေစတွေကို ဒီလိုသာ ခဏခဏ လက်ခံနေရင် ဒီဘ၀ကို သာယာ မိလာမှာ မဟုတ်လား။ ဒီလို အလွယ်လမ်းကို ရေစုန်မျောပြီး မိန်းမော နေခဲ့လို့ လူညွန့် တုံးသွားရသည့် သူတွေ ဘယ်နှယောက် ရှိနေပြီလဲ။
မျက်ရည်စ များနှင့် ဝေသီနေသော အမေအို့ မျက်လုံးထဲတွင် ငွေစအချို့ လှမ်းပေးနေသည့် လက်များ၊ ထူမရန် ကမ်းပေးနေသည့် လက်တစ်စုံ၊ အဖျား တက်နေမည့် မြေးငယ်လေး မျက်နှာ၊ ကျောင်းသွားဖို့ ညှိုးငယ်နေရှာသည့် မြေးမလေး၊ အားလုံးကို မှုန်ဝါးဝါး မြင်နေ ရလေသည်။ ထို့ ပြင် မျိုးရိုးမညံ့ ခဲ့သည့် မိဘ ဘိုးဘွားများ မျက်နှာကလည်း တရေးရေး ပေါ်လာ ပြန်သေး၏။
ထို့နောက် မှိုင်းရီမွဲဖျော့ နေသော မျက်လုံးများ တဖြည်းဖြည်း ကြည်လင်လာသည့် အမေအိုက လက်ကျန် ခွန်အားများကို စုစည်းကာ ဘေးမှာ ကျနေသော တောင်ဝှေးလေးကို ကောက်ယူ အားပြုပြီး မိမိကိုယ်တိုင် ကြိုးစား၍ ထရပ်လိုက်၏။
တရွေ့ရွေ့ လှမ်းသွားသော အမေအိုကို လက်ကမ်း ပေးသူက နားလည်နိုင် ပါ့မလား မသိပေမယ့် အမေအို ကတော့ အရင်ကထက် သွက်လက်သော ခြေလှမ်းများဖြင့် အဝေးသို့ ရောက်သွားလေပြီ။ ကိုင်းနေသော ခါးပင် အနည်းငယ် ပိုမတ်လာ သယောင်။
ကမ်းထားသော လက်ကို ငြင်းပယ်ရသည့် အတွက် အားတော့ နာပါသည်။ သို့ပေမယ့် အမေအို့ မှာက သူ့မျိုး ဆက်တွေကို လက်ဆင့် ကမ်းစရာ အမွေဆိုလို့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား တစ်ခုသာ ရှိတော့သည် မဟုတ်လား။
Unknown5January 2012 at 03:10
၀ိုး... ကောင်းလိုက်တာ အမဆရာမရေ...
စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတဲ့လား...ဟုတ်တယ်ဗျို့... ဖတ်ရင်းနဲ့ ရင်ထဲနင့်ရသလို အဆုံးမှာ အားတက်သွားမိတယ်...
သက်ဝေ7January 2012 at 09:51
ဖတ်ပြီး ငိုင်သွားတယ်... ဘာပြောရမှန်း မသိတော့ဘူး...
စိတ်ဓါတ်ခွန်အားဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကိုပဲ ရေရွတ်နေမိတယ်...
Unknown7January 2012 at 20:44
ဖတ်ပြီး သက်ပြင်းမောကြီး တစ်ချက်ချလိုက်ရတဲ့ ၀တ္ထုမျိုးကို နှစ်သက်တဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ကြိုက်ပါတယ် ဆရာမရေ
လျှံဇွဲကို (စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်) 11 January 2012 at 07:17
Ma Wai, Very Good...
အမ်တီအန် 16 January 2012 at 00:28
၀တ္တု ဆုံးလည်းဆုံးရော သက်ပြင်းမောကြီး ဟူးခနဲ ချလိုက်မိတယ်...။
ဘွားဆုံလို အဖွားမျိုးတွေ တကယ်ရှိနေတယ် မမဝေ..။ မြသွေး အဘွားတစ်ယောက်ကို တစ်ခါ သနားလို့ ငွေလှူရင်း အင်တာဗျူးထားဘူးတယ်။ သူက အခုဝတ္တုထဲကလိုပဲ မထင်မှတ်ပဲ ငွေတောင်းစားသူ ဖြစ်လာရသူပေါ့...။ စိတ်မောစရာ ဒီလို ဘ၀မျိုးနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို လမ်းပေါ်မှာ မမြင်ရက်ဘူး..။
kogyikyaw 21 September 2012 at 02:07
So tough and get it good message and soul of Author. Thanks to have read.